2. Q: Inona ny akora vita amin'ny vokatrao?
A: Amin'ny ankapobeny, ny akora vy amin'ny kaody vy dia Q235. Misy vy hafa koa ho an'ny mpanjifa’ fepetra takiana.
A: Amin'ny ankapobeny, 35% T/T down payment and balance before shipping.
4. Q: Inona no ora fanaterana?
A: Miankina amin'ny haben'ny baiko sy ny karazany izany. Amin'ny ankapobeny, ao anatin'ny 20 andro fiasana, for ordinary order quantity..
—Eny, almost all the product can be customized.
7, Azonao atao ve ny mamolavola sy manao sary ho anay ?
—Eny, manao famolavolana sy sary mety indrindra mifanaraka amin'ny antsipiriany fampiasanao izahay ary mangataka fanamafisana alohan'ny filaminana.
Foshan Yougu Storage Equipment Co., Ltd dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana sy famokarana karazan-kaontenera fitahirizana lojika vy rehetra,tranom-borona, pallet, Trolley, fametahana talantalana,paleta sns izay mpamatsy vahaolana fitehirizana tanteraka.
Ny fiasa sy ny toetran'ny tranom-by vy
Fanasokajiana sy fampidirana ireo kaontenera fitahirizana entana mahazatra (roa)
Fanasokajiana sy fampidirana ireo kaontenera fitahirizana entana mahazatra (One)
Ny antony tokony hitantanan'ny 5S ny pallet trano fitehirizana
Mey 02, 2020
Inona no hatao raha mivangongo ireo entana rehefa avy nanohy ny asany ary tsy ampy ny paleta
Talantalana vy-vokatra vaovao